Archive du 20180306
Mpiasam-panjakana Ho avy ny fitokonana faobe
Miala any indray ny fitokonan’ny mpiasam-panjakana. Mety hiroso amin’ny fitokonana ny Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka na ny SECES rahampitso 7 martsa noho ny tsy fivalian’ny fitakiany.
Fanambaran’i Henri Rabary-Njaka Tsy tongatonga ho azy fa ao raha !
Tafidi-kizo indray ny fanjakana HVM taorian’ny nilazan’ny minisitry ny raharaham-bahiny Henry Rabary-Njaka tamin’ny fahitalavitra Frantsay TV5 Monde fa ny 24 novambra izao ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, ary ny 24 desambra kosa ny fihodinana faharoa.
Leader Fanilo, AVI, MDM, MTS Manohana ny vinan-dRajaonarimampianina
Nitsangana ny vovonana politika ahitana ny Leader Fanilo, AVI, MDM, ary ny MTS, izay nilaza fa vonona hanohana ny vina Fisandratana 2030.
Gilbert Raharizatovo “Marc Ravalomanana no mpandresy”
Vahinin’ny fandaharana “Mandray Vahiny” vokarin’ny fahitalavitra M3TV Mahajanga ny mpamakafaka ara-politika Gilbert Raharizatovo, izay sady mpanao gazety moa no efa avy depiote sy minisitra teo aloha ny faran’ny herinandro teo,
Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Maka traikefa amin’ny Frantsay ny Malagasy
Nisokatra tamin`ny fomba ofisialy omaly tetsy amin`ny Hotel Carlton ny fikaonan-doha fiaraha-miasa faharoan`ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana Malagasy sy Frantsay izay haharitra telo andro.
Karaman’ny mpiasam-panjakana sy tsy miankina Tokony hiakatra amin’ity taona ity, hoy ny SSM
Nanao fanambarana tetsy amin’ny Koots food Mahamasina omaly ny avy eo anivon’ny randrambaon’ireo sendika eto Madagasikara na ny SSM fa hanao hetsika faobe fanairana manoloana ny fitsarana Anosy izy ireo ny zoma izao.
Mpiasan’ny SAMVA mitaky ny zony Mitohy ny antsojay mahazo azy ireo
Mihamafy ny fandrahonana sy ny fanapenam-bava mihatra amin’ireo mpiasan’ny SAMVA izay mitaky ny zony amin’izao, raha araka ny tafa nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety. Isaky ny fivoriana mantsy, hono, ny lehiben’ny SAMVA dia mamerimberina hatrany fa “force sy voay ny tenany ka tsy tokony ho tsapatsapaina na andrama atelina”, fitenena izay tena mampatahotra mafy ireo mpiasa tokoa.
CUA sy ny Région-Ile-de France Tafatsangana ny ivontoerana PRX
Birao 2 sy efitra fivoriana iray etsy amin’ny Masoivohon’i Frantsa Ambatomena misy ny antsoina hoe “Paris Région Expertise” na PRX no nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly alatsinainy 5 martsa 2018.
Horonantsary « Jeune fille au ballon ovale » Hatolotra manonkana eto Antananarivo ny 8 martsa 2018
Tao anatin’ny lanonana fifanaovana sonia fanavaozana fiara-miasa nifanaovan’ny “Association Terres en Mêlées” sy ny banky Malagasy BFV-SG tetsy amin’ny IFM Analakely omaly alatsinainy 05 martsa 2018 no nampahafantaran’ireo tompon’andraikitra fa halefa manontolo eto Antananarivo hoan’ireo olona notsongaina aloha ny horonantsary fanadihadiana « Jeune fille au ballon ovale »
« Tournoi de Pâques 3FA 2018 » Ho lalao nasionaly kely mihitsy
Karazana fifaninana nasionaly kely mihitsy ny fifaninanana « Tournoi de Pâques 3FA 2018 » niantsoan’ny mpikarakara an’ireo solontenan’ny klioba eto Analamanga niara-nifampidinika taminy teny amin’ny salle polyvalente Sabotsy Namehana ny sabotsy 03 martsa 2018 lasa teo.
Fanina tanteraka ny vahoaka ! Inona daholo itony hagegena asehon’ny mpitondra malagasy any an-tanin’olona itony ? Setrin’izany anefa dia tsy heno hatramin’izao hoe io fa voasazy ilay nigarigany fa dia vao mainka aza omaly nomena ny oroka mamy.
Fifanakalozana ara-barotra Kely ny miditra amin’ny fanondranana
Mifarana anio ny atrikasa andiany faharoa hijerena izay hahafahana mampivoatra ny antsoina hoe « commerce de service » na varotra ifanakalozan’ireo mpandraharaha malagasy amin’ny samy eto sy ny sehatra iraisampirenena, indrindra, aty amin’ny faritr’i afrika etsy amin’ny Panorama nanomboka omaly.
ATLETISMA ANATY TRANO
Voahosotra ho tompondaka eran-tany amin’ny vikin-dava misy tehina ny alahady 4 martsa teo tany Birmingham (Grande Bretagne) eo amin’ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondaka eran-tany taranja atletisma anaty trano,